Professional ubusika isandla nokunakekelwa kwezipikili ekhaya > Izinkinga zesifo sikashukela
Isikhathi esibandayo senza abesifazane banake kakhulu ukunakekelwa okufanele ukubukeka kwabo. Futhi lokhu akuyona isikhumba nobuso kuphela. Kepha futhi ukunakekelwa okukhethekile kwezandla namazipho ebusika.
Ukunakekela isikhumba sakho, ungaxhumana ne-salon noma wenze zonke izinqubo ezidingekayo ekhaya. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi kunoma yikuphi kwalawa macala, ukuze uthole umphumela omuhle kakhulu, kuyofanele wenze ukunakekelwa okulula kakhulu kwansuku zonke ekhaya.
Ukunakekelwa kwesandla sasebusika ekhaya
Ikhambi lokuqala nelilula okufanele unake ngalo ngokukhethekile ebusika ukhilimu okhethekile wokuzivikela. Ngemuva kwakho konke, akukho okulula futhi okusheshayo kunokukubeka ezandleni zakho kabili ngosuku.
Ungakhetha ikhambi elikhethekile lasebusika, noma omunye ukhilimu wesandla osondlayo osuselwa ku-oyile wemvelo.
Futhi ungakhohlwa ukuthi isikhumba sesandla kufanele ukuvikela ekubumbeni ngokweqile hhayi kuphela emigwaqweni, kodwa nasekhaya. Ngakho-ke, kungcono ukugeza izandla zakho ngamanzi at lokushisa lamakamelo, futhi leyo misebenzi ebandakanya ukusetshenziswa kwamanzi abandayo kufanele yenziwe uma kungenzeka ngamagilavu.
Ukunakekelwa kwesandla esifanele ebusika akunakwenza ngaphandle ukugeza. Ungazenza zombili salon nasekhaya ngokwakho. Ngokugeza okunjalo kobusika ongakusebenzisa izimonyo ezikhethekile noma amafutha abalulekile noma zemifino. Zondla kahle futhi zivikele isikhumba sezandla sibonga ama-amino acid.
Ukuze unqume ukukhethwa kwamafutha kwenqubo yokunakekelwa kwesandla ebusika, ongoti be-portal salon-magnit.net ulungiselele ukukhetha kwezinketho ezisetshenziswa kakhulu.
Yimaphi amafutha angcono ukukhetha ukunakekelwa kwesandla ebusika?
Ibhotela le-Shea Iphelele kulabo besifazane abahlushwa ukuvuvukala esikhunjeni ngenxa yesithwathwa. Futhi ine-anti-edematous kanye nokulwa nokuguga.
Amafutha eJojoba, equkethe amaprotheni kanye ne-vithamini B12, kuzonikeza isikhumba ukuvuselelwa kabusha futhi kususe ubomvu.
Amafutha e-peach esetshenziselwa kangcono abanikazi besikhumba esincanyana nesinobucayi. Ikususa kahle konke ukucasulwa nokukhonkotha.
Ngaphezu kokugeza, futhi ungenza izinqubo ezifana ehlikihla futhi asonge. Ukunakekelwa kwesandla okunjalo ebusika kuzosiza isikhumba ukuba sihlale sithambile futhi sithenda.
Ukwenza ebhoboza isandla ekhayasebenzisa ikhofi emhlabathini kanye namafutha zemifino. Beka ingxube ezandleni zakho naku-massage. Ngemuva kwalokhu, kungakuhle ukuthi ungagezi izandla zakho, kodwa khumula yonke ingxenye yesibaya bese uthinta isikhumba sezandla zakho ngendwangu emanzi.
Ngemuva kokukhonkotha, kunconywa ukukwenza bophangenkathi usebenzisa elungile kwesikhumba sakho uwoyela. Faka isicelo esikhunjeni sezandla, zizisonge ku-cellophane bese ithawula elifudumele. Shiya imizuzu engu-5-7. Emva kwalokho yenza isisulu esikhanyayo bese ususa uwoyela osele ngethaphu.
Njengoba usuqede zonke izinqubo ezidingekayo zokunakekelwa kwesandla, qiniseka ukuthi uzinika isikhathi futhi unakekele izinzipho zakho. Ebusika, lokhu kubaluleke kakhulu.
Ukunakekelwa kwezipikili zobusika ekhaya
Inqubo eyinhloko ezosiza izinzipho zakho ibukeke yinhle ngisho nasebusika ukugeza uwoyela. Kulokhu, kungcono ukusebenzisa i-castor noma i-olive. Kuzovimbela ukungabi bikhozi futhi kuthambisa amapuleti ezipikili.
Uma ungeza kubhavu enjalo yamafutha amaconsi ambalwa kalamula, kuzokusiza ukubhekana nenkinga enjenge-foliation yezipikili.
Ukuqinisa izipikili buthaka ngenxa yesithwathwa, sebenzisa izihlambi zikasawoti. Ukuze uthole ikhambi, usawoti wasolwandle ungcono. Kodwa-ke, ungabambe izandla zakho ekugeziseni isikhathi eside kangako, ngaphandle kwalokho ugcwala imiphumela elimazayo esikhunjeni sezandla.
Siyethemba ukuthi ngenxa yamathiphu ethu wokunakekelwa kwesandla nangezipikili ebusika, ungaqhosha ngesimo esifanele sesikhumba sakho kanye ne-manicure ephelele nganoma yisiphi isikhathi sonyaka!
Kungani izipikili ziphuka?
Esimweni esidabukisayo sezipikili ebusika, hhayi nje kuphela olubi ukuntuleka kwamavithamini, ngesinye isikhathi sakha zonke izinkinga ngezandla zethu.
1. Amakhemikhali asendlini
Kaningi, amantombazane amaningi enza imisebenzi yasendlini ngaphandle kokugqoka kuqala amagilavu. Akumangazi ukuthi amakhemikhali asendlini, inhloso yawo kungukukhipha nokususa izinto zamakhemikhali ebusweni, ukubuna, ukubhubhisa ipuleti lezipikili, futhi kwesinye isikhathi kuncibilikisa isikhumba.
Amanye amantombazane akholelwa ngamabomu ukuthi uma efaka izimbobo zokuzivikela kwizinzipho zawo, nangemva kokuhlanza, ukuthambisa izandla amafutha, izosindisa emiphumeleni emibi. Kodwa-ke, lapho isikhumba sihlangana namakhemikhali wasendlini, inqubo yokubhubhisa iqala ukuqala, ngakho-ke namafutha noma i-firming varnish angalondolozi emiphumeleni emibi yemikhiqizo yokuhlanza. Ngakho-ke, ungakhohlwa ukugqoka amagilavu ​​lapho wenza imisebenzi yasendlini.
2. Izakhi zofuzo
Lapho uzama ukukhulisa izipikili zakho njengekati, wephula ipuleti lezipikili. Lokhu kwenzeka uma ukwakhiwa kwawo kuqukethe i-keratin encane (iprotheni enani layo elitholwa njengefa). Ngaphandle kokugibela okhethekile, ukuzama ukukhulisa izipikili ezinde, uzohlala uzilimaza, kwanele ukubopha i-zipper kakhulu noma ujike ifindo lomnyango.
Ama-varnish anokuqukethwe okuphezulu kwe-formaldehyde, kanye nemikhiqizo ene-acetone ekwakhiweni, yomisa ipuleti lezipikili. Khetha okungcono ukususwa kwezipikili ezingenazo i-acetone, bese ukhetha i-varnish ngaphandle kwezinto eziyingozi ekwakhekeni.
4. Ukushoda kweVitamin
Ukungabikho kokudla kwemikhiqizo yokudla kanye nama-vitamin complexes ane-calcium, i-zinc, amavithamini A, B, C, i-iron kuholela kunciphisa ipuleti lesipikili nokushuba kwaso. Qala ukubheka ukudla okudlayo bese uthatha ama-vitamin complexes njengoba eyalelwe udokotela wakho.
Izifo ze-gland yegilo, ushintsho lwamahomoni luholela ekushodeni kwamavithamini kanye namaminerali emzimbeni, kuthinta impilo yamazipho.
Ebusika, umoya osekamelweni womisa ipuleti lezipikili, futhi uma lungemunyisiwe, isipikili sizoqala ukuthamba, yingakho kubukeka sengathi ebusika izinzipho ziya buthaka kakhudlwana. Moisturize izandla zakho nezinzipho njalo
Uma uvame kakhuluizandiso zezipikili, usebenzisa amafayela we-iron noma amafayela anesiphithiphithi esisebenzayo sokugaya nokuletha isipikili esimweni sokulwa, wephula ukwakhiwa kwesakhiwo, uyinciphise. Ngakho-ke, sincoma ukubuyisela amafayela wezipikili ngengilazi. Ukuphuza ngokweqile kwama-Vitamin complexes kungabikwa nokuhlukumezeka ngaphandle kokubonana nodokotela kuqala.
Isibonelo, uma une-calcium eyanele emzimbeni wakho, futhi uyiphuza ngokweqile, khona-ke ipuleti lezipikili lizoqala phansi ngaphansi kwesisindo sale mineral.
Le ndlela yokunakekelwa kwezandla yayisetshenziswa amaRoma asendulo, ngalezozinsuku iparafini yayitholakala kuma-resins. Namuhla, lo mkhiqizo ungumphumela wokuqunjelwa kwe-oyili; ngezinqubo zobuhle, upharafini ucebiswa ngamafutha nangamavithamini. Ukuqanjwa kwayo nezakhiwo ezikhethekile kusiza ama-pores amahhala kusuka kubuthi, izinhlayiya zesikhumba ezifile, zikhuthaza ukwenziwa kabusha kwamanxeba, ukusikeka, futhi kuqinise ipuleti lezipikili.
Ekhabin: Unganikeza izinketho ezimbili zenqubo - uphalafini obandayo futhi oshisayo. Inketho yesibili yalabo abanezinkinga ngohlelo lwezinhliziyo, kanye nolwabesifazane abakhulelwe.
Ukulungiselela inqubo ejwayelekile kubhavu ekhethekile kagesi, inkosi incibilikisa ukwakheka kwayo ibe ngama-50 degrees. Ngenkathi ipalafini ivutha bhe, izandla zakho zifakwe kubhavu olufudumele, bese zihlanzwa ngesikhafu (izinga lokuhlukumezeka elikhethwe yinkosi kuye ngohlobo lwesikhumba, olubucayi - oluthambile noluthambile).
Isinyathelo esilandelayo, wehlisa izandla zakho kuparafini kaninginingi (ukufudumala kwinto yokushisa ephezulu ngeke kukubangele ukungakhululeki noma ukusha). Uchwepheshe ulindela ifilimu likaphalafini ukuze aqinise, abeke izandla zakho polyethylene, namagilavu ​​athambile endwangu athambile aphezulu. Isenzo se-Thermal sithuthukisa ukuhamba kwegazi, sivumele izingxenye ezingcono ukuthi zingene esikhunjeni.
Ngemuva kwemizuzu engama-20, imaski yephalafini iyasuswa, bese kuthi iparafini uqobo ihlukaniswe kanye nengxenye ye-polyethylene, kanye nayo amabala esikhumba keratinous. Ngemuva kwalokho kusetshenziswa ukhilimu owondlayo noma omanzi ezandleni, kuye ngenkinga. Uzozizwa ngokushesha ngemuva kwenqubo yokuthi isikhumba sezandla zakho sesibe bushelelezi futhi sibuthuntu.
Ekhaya: ngoba kungcono ukuthola ukwelashwa kukapharafini izikhathi ezingama-2-3 ngesonto, ungakwenza kalula ekhaya, noma kunjalo, amanye amalungiselelo angathatha isikhashana.
Kufanele uthenge iparafini enongiwe ekhemisi noma esitolo sezimonyo ezikhethekile (izinto ezenziwe ngamakhandlela ngokwazo azilungele le nqubo). Uma ungenayo okugeza kagesi ekhaya, ungancibilikisa uphalafini kubhavu wamanzi (cishe amagremu angama-700 azodingeka kwinqubo eyodwa) ngisho naku-microwave kwimodi ye "defrost" ngamandla okungenani noma kuhhavini ekushiseni kwama-degrees angama-60. Ungakhohlwa ukuthi ukwakheka kufanele kufudunyezwe kumadigri angama-50.
Preheat isikhumba kubhavu, bese usikhipha bhala. Ngemuva kokuthela uphalafini esitsheni, zama ngemuva kwesandla sakho, uma kushisa kakhulu bese uqala inqubo yokwelapha iparafini.
Inqubo yenziwa ngesandla ngasinye ngokwahlukana, ukuze kube lula ukugqoka igilavu ​​bese uyisusa. Faka isandla entweni emzimbeni izikhathi ezi-2, linda kuze kube yilapho iphalafini iqina, faka i-polyethylene, futhi ngaphezulu - isicubu sikotini, ususe ngemuva kwemizuzu engama-20.
Phinda inqubo efanayo nolunye uhlangothi, bese usebenzisa i-moisturizer. Uma ngenxa yezizathu zezempilo ungeke wenze inqubo usebenzisa uphalafini oshisayo, thenga ukhilimu weparafini (uphalafini obandayo) ekhemisi. Yenza izinqubo zokulungiselela, bese usebenzisa ukhilimu bese ufaka amagilavu ​​kakotini, uwasuse ngemuva kwemizuzu engu-15. Okokugcina, faka ukhilimu onempilo.
Le nqubo yenzelwe nje labo abanesikhumba esomile kakhulu, i-burrs kanye ne-cuticle esebenzayo. Ukusuka ngaphandle, kubonakala sengathi le siko lifana ncamashi nokwelashwa kukaphalafini, kepha akukho okuphikisana ne-manicure eshisayo.
Ekhabin: inkosi iphekela ukhilimu okhethekile, noma ukwakheka kwamafutha anomsoco okugeza, kumazinga okushisa angama-50. Izandla zakho zibuye zimbozwe futhi ziphathwe ngesikhafu. Ngemuva kwalokho wehlisela izandla zakho ku-shushu evuthayo. Ukwakheka kwamafutha ngaphansi kwethonya lokushisa ngenkuthalo kondle isikhumba, kuthambisa i-cuticle (lokhu kusiza enqubweni yokususwa kwayo), kunciphise ubomvu nokubhoboza, futhi kusize ekwakheni kabusha isikhumba esonakalisiwe.
Ekhaya: kubhavu wamanzi, shisisa i-oyili (i-olive, i-almond, i-avocado) ukuya kuma-40-50 degrees. Ngemuva kwezinqubo zokuqala zokuhlanza isikhumba, yehlisa izandla zakho kubhavu eqediwe imizuzu engama-20-25. Ngemuva kwesiko elinjalo, i-cuticle isetshenziswa ngosizo lwezinduku zokhuni.
Le nqubo yokuphumula yangempela nokuphulukisa kwezandla namazipho ebhodleleni elilodwa.
Ekhabin: isiko kwenzeka ngezigaba eziningana - ukukhonkotha, ukugeza izandla, imaski eyondlayo kanye nesigaba sokugcina sohambo - ukuphumula ukucwilisa izandla.
Ekhaya:hlela i-spa resort Ungazenzela ngokwakho. Qala ngenqubo yokutshekisa, lapho usuzilungisele amanzi okugeza izandla zakho ngaphambili (izinga lokushisa lamanzi kufanele libe ngama-37 degrees), khetha izakhi nezakhi zalo mkhuba ngokuya ngenkinga yakho. Futhi, ngokweqiniso, sikucebisa ukuthi udale umoya wokuphumula - lokhu kuzosiza ukuzola komculo namakhandlela anephunga.
Faka amaconsi ayishumi kawoyela we-peach, amaconsi ama-4 kavithamini A (othengiswe ekhemisi) kanye namaconsi ama-2 e-iodine ayogeza. Lokhu kuhlanganiswa kuqinisa ipuleti lezipikili, kuvimbela ukuqothuka kwalo, kusize ukwehlisa ukukhula kwe-cuticle. Gcina izandla zakho kubhavu imizuzu eyi-15.
Ukugeza okunyisayo kwezandla ezomile
Faka amaconsi ama-4-5 wamafutha omnqumo, i-almond ne-peach, kanye nejusi kalamula okugeza. Bamba izandla zakho imizuzu eyi-10.
Bha yezandla eziphukile, ukucasulwa kanye nokubomvu kusuka kusithwathwa
Ngokuvuselela okusheshayo nokwelashwa kwezindawo zesikhumba ezilimele, hlanganisa amathonsi ayi-10 kawoyela wamafutha, amaconsi ama-5 omsedari bese ufaka amanzi afudumele. Bamba izandla zakho imizuzu engu-15.
Ngemuva kokugeza, ingxenye yesibili yenqubo iyalandela - ukubhucungwa. Kuyadingeka ukuze kuhambisane nokujwayelekile ukujikeleza kwegazi, ngaleyo ndlela kusheshiswe ukukhula kwezipikili nokuvuselelwa kwesikhumba. Ukuhlanza umzimba kungenziwa usebenzisa i-moisturizing, ukhilimu owondlayo noma owoyela - ibhotela le-shea, umuthi wetiyi, i-lavender, i-almond (amaconsi ama-4-5) kufaneleka kahle.
Shaya isandla sakho kusuka emuva nasentendeni yesandla, bese uxubha iminwe yakho kusukela kumathiphu kuya kwesisekelo ngokunyakaza okubamba. Phinda izikhathi ezi-4.
Massage iminwe yakho kuzo zonke izinhlangothi kusuka kumathiphu kuye kwesisekelo ngokunyakaza okucindezelayo. Phinda izikhathi ezi-3.
Massage yonke iminwe ngokuzungeza ngokunyakaza okufana nokugoqa, ukuphindaphinda izikhathi ezine.
Ukusuka esisekelweni seminwe kuya esihlakaleni, ukubhucungwa komzimba kwenziwa ngokujikeleza kokujikeleza okujikelezayo okujikelezayo. Kufanele ubambe uzungu lonke lentende. Phinda izikhathi ezi-5.
Usebenzisa ukunyakaza okuvuliwe kusuka esisekelweni seminwe kuya esihlakaleni, thambisa intende yakho, ugobe isandla sakho emhlane ngesithupha. Phinda izikhathi ezi-3.
Massage isihlakala sakho ngokunyakaza okujikelezayo kusuka phansi kuya phezulu, hlanganisa ukunyakaza ngakunye ngokushaya. Phinda izikhathi ezi-5.
Massage ibhulashi ngentende yonke kusuka esisekelweni seminwe kuya esihlakaleni.
I-coating, i-manicure ye-trim, ukugaya kanye nezipikili
Umkhakha wanamuhla unikeza izembatho zokukhanya ezilondekile futhi eziphephe ngokuphelele ezenzelwe ngqo ukusekela impilo yamazipho, zivumele ukuba zikhule ngobude, ziqinise futhi zinciphise ubumsulwa. Izinqubo ezaziwa kakhulu okwamanje igobolondo kanye ne-Gelkalor OPI ethuthuka izithende zakhe, inzalo yejeli ne-varnish ebhodleleni elilodwa.
Ekhabin: Inqubo yenzeka ngezigaba eziningana. Okokuqala, inkosi yenza ukuhlanzeka, bese kuncishiswa noma kube yi-European indwangu (ekukhetheni kwakho). Ngokulandelayo, kuzokwehlisa izipikili bese kufakwa i-top kubo, kulandele ungqimba lwesibili oluphezulu, kanye nomthunzi owukhethile wephalethi elikhulu (kukhona nethuba lokwenza ijacket, ukwakheka kwezipikili, konke kuya ngesifiso sakho), kwengubo ephezulu yokugcina - ungqimba ngamunye womile ngaphansi kwesibani imizuzu eyi-1-2.
Okokugcina - ukukhulisa ipuleti, kufakwa uwoyela endaweni ese-cuticle. Nge-coating, ungahamba amasonto ama-2 (kuze kube yilapho inyanga ikhula), phakathi nesikhathi lapho ingaphumeli khona, ingaphuki, kwenza ukuthi ukwazi ukuphefumula epuleti lezipikili futhi kunganciphisi (ngokungafani ne-acrylic ne-biogel).
Ekhaya: theoretically, uma unesibani esikhethekile nazo zonke i-varnish neziqobelo ezenzelwe ngqo ukuhlanganiswa (kuphela izinto ezisetshenziswayo ezikhethekile lapha), wonke amasiko angenziwa ekhaya. Ukupheka, ngendlela, kususwa kalula usebenzisa i-foil kanye noboya bekotoni ofakwe kwi-nail Kipolver remover.
I-cuticle ingqimba yesikhumba esifile, uma isuswe ngokucophelela, izothuthukisa ukuphefumula kwezipikili ezithambile futhi izovusa ukukhula kwepuleti lezipikili.
Ekhabin: inkosi yenza konke ngokunemba okuhlinzwa, igazi, ukusikeka okuncane emcimbini onjalo akwamukeleki. Ngakho-ke, uma ungaqiniseki ngamakhono akho, yeka kuchwepheshe.
Ekhaya: qala ngokugeza izandla, i-manicure yokuhlanzeka, bese uqhubekela esikhathini esibaluleke kakhulu. I-cuticle kungcono ukukhipha ngosizo lwama-nipers akhethekile abukiswe kahle, lokhu kunciphisa amandla okuklebhula isikhumba ezungeze izipikili.Musa ukusika i-cuticle ngokujulile, ukunyakaza kufanele kube futhi bushelelezi emgqeni. Ama-Jerks awavunyelwe.
Ake siqale ngezandla. Ukuze ube nezandla ezinhle nezilungiselelwe kahle, udinga ukwenza imvamisa. Sizokhuluma ngendlela yokwenza i-manicure elula ekhaya.
Okokuqala, qoqa konke okudingayo ngenqubo. Okudingayo i-Kipolishi yezipikili, izipikili zezipikili, ukukhipha izipikili ngezipikili, ama-pads / ama-tampon, i-cuticle pusher, i-cuticle remover, i-moisturizer, ijazi lesisekelo nezinye izinto ocabanga ukuthi ziyadingeka.
Faka isandla esisodwa esitsheni esinamanzi afudumele wesepha bese uwasha kahle, ungangeza futhi amaconsi ambalwa kawoyela obalulekile owuthandayo emanzini.
Sula isandla sakho ngethawula elomile bese usebenzisa i-cuticle remover imizuzu engu-10-15.
Sula izipikili ngephedi yokotini ebunjiwe ku-remover ye-Kipolishi yokususa, ususe i-varnish esele bese uyihlalisa kabusha.
Ngesisi esihle se-manicure zinikeza izipikili zakho ukwakheka okufisayo bese usebenzisa ujusi omncane kalamula kuzo ukuze unciphise ukubekezela. Letha ijamo ngefayela lesipikili.
Manje faka i-lotion noma ukhilimu wesandla ezandleni zakho, shiya imizuzu eyi-10, ukuze isikhumba sibe nesikhathi sokuzizwa uvuselelekile.
Manje ungapenda futhi uhlobise izipikili zakho ngaphandle kokukhohlwa ukufaka isisekelo sokuzivikela ngaphambi kokupenda.
Imithetho Yezokunakekelwa Kwezandla
Izincomo ezimbalwa zokuthi ungazivikela kanjani izandla zakho phakathi nosuku.
Izandla zethu zivezwa njalo ngezinto ezingezinhle zangaphandle, kufaka phakathi umoya owomile, amakhaza, namakhemikhali ahlukahlukene. Ukuze unciphise ukulimala, ngaso sonke isikhathi kufanele ube namagilavu ​​owenzelwe wonke amathuba.
- Ngokwesimo sezulu esibandayo kufanele ube nesikhumba, amagilavu ​​woboya noma ama-mittens.
- Ngemisebenzi yasendlini, gcina amashansi egilavu ​​e-latex noma enjoloba.
- Ngomsebenzi engadini, thola amagilavu ​​endwangu.
Kubalulekile ukugeza izandla zakho kahle.
Ngenxa yokuxhumana njalo namanzi nensipho, isikhumba sezandla siqala ukuphelelwa ngumswakama bese sithamba. Ukugwema lokhu, imithetho elula kakhulu kumele ilandelwe.
- Ungasebenzisi insipho ye-antibacterial ngokungadingekile futhi uzame ukuthenga insipho ngaphandle kwamakha, ngoba yomile kakhulu futhi ingadala ukucasuka. Insipho kufanele ibe nezithako zokuthambisa ezinamafutha omnqumo, i-aloe vera, uwoyela we-jojoba.
- Ukuze ulondoloze ulwelwesi olungokwemvelo lwesikhumba, geza izandla ngamanzi afudumele. Amanzi ashisayo lapha akuyona umsizi wakho.
- Misa ukusebenzisa i-dryers kagesi, ungene esikhundleni sayo ngamathawula wephepha.
Khumbula mayelana nokuxoshwa kanye nokudla
Ngaphezu kokusebenzisa ukhilimu wesandla, kufanele uhlale unamamaski nezihlava bese uzisebenzisa kanye ngesonto.
- Yenza imaski yezandla emikhiqizweni esetshenzisiwe. Isibonelo, hlanganisa uhhafu we-avocado, isipuni sejusi kalamula neqanda leqanda. Faka umxube ezandleni bese ushiya imizuzu engama-20.
- Ungasebenzisa ingxube kashukela namafutha omnqumo njengesikhuhli.
- Izeluleko ezinhle zabavilaphayo: uma usebenzisa isikulufu noma ubuso / imaskhi yomzimba, bese uyisebenzisa ezandleni zakho.
Isidingo se-hydration ejwayelekile
Ikhilimu yezandla esezingeni eliphakeme iyadingeka nje nge-shampoo nensipho, ngakho-ke khetha ngokucophelela.
- Sebenzisa ukhilimu wezandla njengoba kudingeka, kepha kwenziwa kangcono kabili ngosuku, ekuseni nakusihlwa. Uma isikhumba sezandla zakho somile kakhulu, bese usebenzisa ukhilimu ngemuva kokugeza izandla ngakunye. Ngomthelela omkhulu kakhulu, ngemuva kokusabalalisa ukhilimu, faka amagilavu ​​kakotini ezandleni zakho bese uwushiya usebenze ubusuku bonke.
- Izinzipho zakho zidinga ne-hydration. Ungakhohlwa ngabo, lapho usebenzisa ukhilimu wezandla, nge-cuticle ungathenga umkhiqizo ngo-Vitamin E.
- Isikhumba asidingi i-hydrate yangaphandle kuphela, ngakho-ke ungakhohlwa ukuphuza amanzi anele.
- Qiniseka ukuthi usebenzisa umswakama phakathi nesikhathi sokushisa.
Ungazinakekela kanjani izandla zakho
Ukusetshenziswa kwe-sunscreen kuyimpoqo
Enye yezimpawu eziphambili zokuguga ukufakazelwa isikhumba sezandla. Isizathu salesi simo silele emisebeni yelanga, hhayi ngaso sonke isikhathi ekugugeni nasekusebenzeni kahle kwesibindi, njengoba kunenkolelo evamile. Kuyo yonke nje iminyaka, umphumela wokuhlanganisa uyakhiwa.
- Sebenzisa i-sunscreen njalo ezandleni zakho ukuvikela amabala wobudala.
- Izithelo zeCitrus ziyi-bleach enhle yemvelo. Isibonelo, ungenza ngezikhathi ezithile imaski yesikhumba sezandla ngengxube ye-1 tbsp. l ujusi kalamula, 1 tsp uju no-1 tbsp. l ubisi.
- I-SPF yokuvikela ilanga kumakhilamu kufanele okungenani ibe ngu-30.
Ungazinakekela kanjani izinyawo zakho
Imilenze yileyo ngxenye yomzimba ebekezelela ukuhlolwa okunzima ngaso sonke isikhathi lapho uphuma endlini. Ehlobo, imilenze ihlala “ivaliwe” ezicathulweni, okuvame ukubangela ukutheleleka. Ukunakekelwa okungafanele noma ukuntuleka kwayo kuholela ekubonakaleni kwemifantu emilenzeni. Imvamisa imvamisa ingumphumela wesikhumba esomile nokuhlanzeka okungajwayelekile.
Nakhu Okubalulekile Ukwazi Ngokukhathalela Izinyawo Ezifanele
1. Gcina izinyawo zakho njalo emanzini afudumele.
Indlela engcono yokunakekela izinyawo zakho ukuwagcina emanzini afudumele njalo. Ngenxa yalokhu, uzosusa ukukhathala. Futhi, le ndlela izokusiza ukuthi ujabule futhi ukwandise ukuhamba kwegazi emilenzeni. Yenza le nqubo njalo ukuze ube nemilenze enhle futhi ephumule.
Lo mkhiqizo ofunekayo wezimonyo udonsa kahle umswakama owengeziwe ezinyangeni ezishisayo zasehlobo. I-powder enezinga eliphakeme izosiza izinyawo zakho zizizwe zizinhle, futhi zikusize uzizwe unamandla ngokwengeziwe usuku lonke.
Futhi kuzokusindisa enkingeni yephunga elibi. Sebenzisa i-powder kaningi futhi ngesilinganiso esanele, khona-ke imilenze yakho iyohlala iyintsha futhi iphumule.
Ukuvikelwa kwelanga akudingekile kuphela ebusweni nasezandleni. Ngaphansi kwethonya lemisebe ye-ultraviolet, isikhumba semilenze naso siyahlupheka futhi simbozwe amabala obudala, ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi uma uphumela ngaphandle imilenze yakho ivulekile, ungakhohlwa ngengxenye yokuphakama yelanga elisezandleni zakho. Lokhu kuzobasindisa ekushisweni nasebusweni obumnyama.
4. Ungakhohlwa ngamadolo
Izinduna nazo zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Ungakhohlwa ukuwahlanza njalo, ngaphandle kwalokho ngesizini ezingutsheni zakho ezivulekile ozithandayo ngakho konke ukuzilungisa uzobukeka kukubi.
Izinyawo ezijwayelekile ezihlanganiswa nezilungiselelo zonyawo zingasebenza izimangaliso. Ngezansi sizokutshela ngezinqubo eziningana ongazenza ekhaya ukuze uzilungiselele kahle nemilenze ephilile.
Into eyisisekelo kunazo zonke okudingeka uyinakekele ukusikwa okufanele kwezipikili kanye nokudalwa kwesimo. Sebenzisa isicoci sezipikili esihle, bese usika ngokucophelela bese usika ngokulinganayo, ngoba uma usika isiyingi, lapho-ke ungahlangabezana nenkinga engathandeki kakhulu yamazipho wokufaka izipikili. Futhi, ukuze ugweme ukugxila kwezipikili, awudingi ukukusika kube kufushane kakhulu.
Hlanza izinyawo zakho ngokuzigeza ngamanzi afudumele. Faka usawoti wokugeza bese uvumele izinyawo zakho zingene shí kuwo. Ngemiphumela emihle kakhulu, engeza amaconsi ambalwa ka-oyili obalulekile owuthandayo noma ukumiliselwa amakhambi. Ungabeka amatshe amatshe ambalwa noma isihlabathi esihlanganayo ngaphansi kwethangi, lawa massager amahle kakhulu.
Amabhati wenziwa kangcono okungenani okungenani isikhathi esingu-1 ngeviki, ahlala imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20.
Isinyathelo esilandelayo ukuxosha isikhumba semilenze. Faka ukhilimu we-cuticle remover esisekelweni sezipikili ngasinye, ikhefu, futhi okwamanje sebenzisa isikrippa sonyawo ukukhulula izinyawo zakho zamaseli wesikhumba owomile nofile. Qaphelisisa ngesikhuhla, ungafafazi kanzima. Izithende zingahlikihlwa nge-pumice ukukhipha isikhumba esinolaka.
Ngemuva kwalokho, susa i-cuticle nge-pusher. Susa i-cuticle kuphela ngosizo lukakhilimu, uma uzama ukwenza lokhu ngendlela etshaliwe, ungathola ukuthi iyini isipikili sokufaka.
Ngemuva kwenqubo yangaphambilini, geza izinyawo zakho ngamanzi ahlanzekile bese usebenzisa i-moisturizer. Le yingxenye ebaluleke kakhulu yokunakekelwa. Kuzovikela isikhumba semilenze ekuqhekekeni okungenzeka futhi kuyenze ithambe.
Thenga imikhiqizo equkethe izithako ezinomswakama, njenge-lecithin ne-glycerin, nama-emollients, anjenge-lanolin, dimethicone, i-petroleum jelly. Khumbula ukuthi kungcono ukungagcini izindawo eziphakathi kwezinzwane, ngoba lokhu kungaholela ekubukekeni kwesikhunta.
Massage imilenze yakho, ukuvivinya umzimba njalo kuvuselela izinzwa, kuthuthukisa ukuhamba kwegazi, kunikeze isikhumba amandla futhi kuqinise nemisipha yonyawo. Leli ithuluzi elihle kakhulu elizogcina impilo yomlenze futhi lidambise ukukhathala. Zama ukunikeza imizuzu engu-5 nsuku zonke.
Thenga i-massager yale nqubo noma vele ugoqe phansi kunoma iyiphi into eyindilinga.
- qiniseka ukugcina izinyawo zakho zomile
Lesi ngesinye sezisekelo eziyisisekelo zokuhlanzeka kwezinyawo, njengoba umswakama owedlulele uyisizathu esiyinhloko sokubonakala kwesikhunta. Ukugcina izinyawo zakho zome njalo, landela imithetho embalwa elula.
Okokuqala, isikhumba kufanele siphefumule, ngakho-ke khetha izicathulo kuphela kusuka kwimvelo yemvelo.
Okwesibili, ngemuva kokugeza, sula izinyawo zakho zomile.
Okwesithathu, ungagqoki izicathulo ezifanayo izinsuku eziningana zilandelana.
Uma namanje awukwazanga ukugwema i -ingngrowth, khona-ke ungazama ukuqeda le nkinga ngale ndlela elandelayo:
1) Faka izinyawo zakho emanzini afudumele imizuzu engu-15-20. Ukubulala amagciwane amanzi, engeza u-1 tbsp. l usawoti ojwayelekile kwilitha elilodwa lamanzi.
2) Ubumnene kahle i-nail nge-floss yamazinyo bese uyiphakamisa kancane.
3) Phatha ngokushesha indawo elimele nge-antiseptic bese umboza indawo nge-band-aid.
4) Yenza lokhu nsuku zonke kuze kube yilapho isikhonkwane sibuyiselwa.
Uma isimo sibi kakhulu, kanti ukuvuvukala nokubomvu kuphela kukhula, khona-ke ungazidabuli, bonana nochwepheshe.
Izindlela zokupheka ezenziwa ngesandla nezinyawo
Ukudla okuvame ukutholakala kunoma iyiphi ikhishi kungathuthukisa impilo yesikhumba sakho.
Ijusi kalamula no-anyanisi obomvu
Lezi acid zemvelo ezisebenza ngokubambisana njenge-bleach. Lokhu kungenziwa okuhle okwenziwe amakhomikhali amhlophe amhlophe. Thatha ithisipuni elilodwa lemikhiqizo yomibili bese uxuba kahle. Faka le ngxube esikhumbeni bese uyishiya imizuzu engu-15 ukuya kwengama-20.
Ngemuva kwenqubo, qiniseka ukuthi ugeza izandla nezinyawo kahle, ngaphandle kwalokho iphunga ngeke lijabulise kakhulu.
Ikhofi, ama -ondondomu nobisi
Thatha i-alimondi enedlanzana bese uyiquma ku-blender. Hlanganisa ubisi oluphuma bese ufaka izinsalela zekhofi yakho yasekuseni kule ngxube. Ubisi lwe-almond liqukethe inani elikhulu lama-antioxidants ne-Vitamin E, alusizo kakhulu ekuthambiseni isikhumba sezandla nezinyawo.
Faka isicelo kule ngxube. Shiya ukuthatha isinyathelo imizuzu engu-15 ukuya ku-20 ugeze kahle. Imaski enjalo izovikela isikhumba emiphumeleni yama-radicals ayingozi, abangela ukulimala kwamaseli nokucekelwa phansi kwe-collagen. Ngenxa yalokho, isikhumba siyoma futhi siqhekeke.
Izizathu zekhofi zinezindawo ezinhle zokuxebuka, ezidlala indima ebalulekile emisebeni yesikhumba.
Itiye le-Peppermint liyasiza kakhulu ngoba luthuthukisa ukuhamba kwegazi, okunikeza isikhumba ngokukhanya okukhanyayo. Ungafaka futhi i-peppermint esikhunjeni sakho ngokuqala ngokuguqula amapheshana abe uginindela. I-Peppermint inomphumela omuhle kakhulu wokuqabula, futhi yilokhu nje okudingayo ukuze ulondoloze isikhumba sezandla nezinyawo zakho ekushiseni okushisayo kokushisa ehlobo.
Hlanganisa amathisipuni amabili kasawoti kalamula nesipuni esisodwa se-glycerin nesipuni esisodwa samanzi aselangeni. Gcina le ngxube ebhodleleni lengilazi. Faka le ngxube nsuku zonke bese uzihlanza ngaphambi kokugeza. Ungayisebenzisa futhi ngaphambi kokulala.
Ufulawa weChickpea, ijusi kalamula nobisi
Yenza ingxube ngokuxuba izipuni ezi-2 zikafulawa we-chickpea (Besan), 1 isipuni sobisi kanye no-1 isipuni sejusi likalamula. Beka ezandleni zakho, ushiye imizuzu engu-15 ukuya kwe-20, hlambulula. Yenza lokhu nsuku zonke ngobuhle nokuthambile kwezandla zakho.
I-curd, i-turmeric, ufulawa we-chickpea
Le ngxube yemilingo izothokozisa isikhumba sakho. Hlanganisa izipuni ezintathu zoshizi we-cottage shizi, isipuni esisodwa se-turmeric, kanye nezipuni ezimbili zikafulawa we-chickpea. Faka le ngxube ezandleni nasezinyaweni, bese ugeza ngemuva kwemizuzu embalwa. Ngokusebenzisa njalo, izandla zakho zizophendula ngobumnene nangobuhle.
Ikhaya → Ezempilo → Ukunakekelwa Komuntu → Ungazinakekela kanjani izandla zakho ebusika: Izeluleko ezi-8 ezinhle
1. Qiniseka ukuthi ugqoke amagilavu.
Gqoka amagilavu ​​- zombili zifudumele ngaphambi kokuya ngaphandle, kanye nerabha ngaphambi kokuhlanza indlu. Mhlawumbe lokhu kulula kakhulu, kepha ngasikhathi sinye indlela esemqoka, ezokhulula isikhumba sezandla kusuka ekomeni, imifantu nakwezinye izinkathazo. Ukuhlanza ifulethi akunakwenzeka ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali ahlangabezana kahle nokungcola nothuli, kepha ukulimala kabi esikhunjeni. Amakhemikhali asendlini abhubhisa ungqimba lwe-epidermis, ngaleyo ndlela anciphise isikhumba sokuvikelwa kwayo kwemvelo, futhi uma ungasebenzisi amagilavu, umphumela uyoba lusizi - izandla ezomile nezomile, ubomvu, ukucasuka, ukusabela komzimba.
Faka ukhilimu onempilo njalo
Ebusika, kubalulekile ukusebenzisa ukhilimu onempilo njalo, hhayi i-moisturizer. Iqiniso ngukuthi izakhi ezakha okhilimu ezinomswakama zakha ama-microcrystals athinta kabi isimo sesikhumba, zakha imifantu encane nomonakalo ongabonakali esweni. Ngaphezu kwalokho, okhilimu abanjalo bangaqeda isikhumba - le nqubo engemnandi ithintwa yizinga lomswakama ngaphandle nangaphakathi endlini. Uma, ngokwesibonelo, izinga lomswakama egumbini lingaphansi kuka-60%, ukhilimu osetshenzisiwe ngeke ukwazi ukugculisa isikhumba ngomswakama, kodwa kunalokho kwenze nokuba ome kakhulu. Ukuze izandla zijabulise ukubukeka kwazo ebusika bonke, faka ukhilimu onempilo kunoma yiluphi uhlangothi: geza izandla zakho - usebenzise ukhilimu, hlanza - sebenzisa ukhilimu, uhlele ukuphuma ngaphandle - sebenzisa ukhilimu. Ngenxa yalo mkhuba, izandla ziyohlala zilungiselelwe kahle futhi zimnandi lapho uthintwa. Futhi yini okufanele ibe yiyo ukwakhiwa kukakhilimu wasebusika - isazi sethu siyaphendula.
- ukhilimu wasebusika kufanele aqukethe ama-lipids namafutha anamafutha agcwele asiza ukubuyisela ibhalansi ye-lipid. Into esemqoka yokuvuselela amandla okhilimu anjalo yi-allantoin, futhi kuyasiza ukubuyisela isikhumba esonakele. Amavithamini eqembu A afaka isandla ekuhlanganiseni kwamangqamuzana amasha, amavithamini eqembu E asuthisa kahle isikhumba, futhi ngokubambisana aqeda ukuntuleka kwamavithamini esikhunjeni futhi athuthukise ukwakheka kwesikhumba. Uju nezinyosi kuqinisekisa ukuvikeleka okunomsoco nokunomsoco. Amafutha e-Avocado, jojoba, cocoa kanye nejusi le-aloe kuthambisa isikhumba, abe nama-antibacterial, anti-inflammatory futhi, okubaluleke kakhulu, anendawo yokupholisa amanxeba. Inani le-glycerin ekhishini lasebusika kufanele libe lincane, ngoba i-glycerin ivimbela ukungena komoya-mpilo esikhunjeni, isheshise ukuguga kwayo.
3. Sebenzisa insipho yokuthambisa
Abantu abaningi abakholelwa umehluko phakathi kwezinsipho ezijwayelekile, ezinomswakama nezinamandla. Kodwa-ke: ukwakheka kwensipho enjalo kuhluke ngempela - banezela isithako esikhethekile ku-antibacterial, triclosan, kuzobulala amagciwane ahlukahlukene, kepha le nsipho, njengensipho ejwayelekile, yomisa izandla kakhulu. Esikhathini sobusika, kungcono ukushintshela kusepha lokuthambisa, kunombala onokhilimu futhi uqukethe uwoyela ahlukahlukene kanye nezinto ezikhishwe okuhlose ukondla nokubuyisela isikhumba, kanye ne-Vitamin E.
4. Musa ukugeza izandla ngamanzi ashisayo bese usula kahle ngethawula.